Sulieman gaal iyo Amina Weris labaduba Silaanyo way ka aar goosanayaan by Abdi Mustafe‏
Sulieman gaal iyo Amina Weris labaduba Silaanyo way ka aar goosanayaan by Abdi Mustafe‏ 0 July 20, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 624
Sulieman gaal iyo Amina Weris labaduba Silaanyo way ka aar goosanayaan by Abdi Mustafe‏ Silaanyo
wuxuu noqday nin dabin u galay duul ay coloobeen. Shirkii Garadag waatii Sulieman gaal lagu xidhay geed qudhaanjo le. Ee lagu yidhi musharax nimadana uuga hadh oo haduu Silaanyo soo baxana ha ka hor iman.
Silaanyo iyo Sulieman sabaan ka sabaan bay col ku ahaayeen siyaasada dabeed Garadag ayaa lagu kala reebay isaga oon Sulieman raali ka ahayn qaraarka reerku qaatay. Hadaba maanta Sulieman si fiican ayuu uuga aar goostay Silaanyo isagoo ku qasbaya mudo kordhis aannu Silaanyo taag u hayn si bulshadu u nacdo oo waagii beryaba la hadal hayo Silaanyo xumaan
tiisa. Sulieman gaal oo naanays tiisu inagaga filantay oon weligii aan wanaag ka shaqeyn oo madax adag oo macangag ah ayaa Silaanyo la helay surma-seegto oo ku hayo ilaa maalinkaa maanta ah. Silaanyo na cid u hiilisa oo ka qabata Sulieman wuu la'yay. Dabeedna xuurtadaa ayuun buu ku haynayaa ilaa inta caruurta Silaanyo baraaruga yaan oo ay Silaanyo ku
odhanayaan aabo meesha ku ceebowday ee iskaga deg. Qofka
labaad ee iyana si arxan dara ah Silaanyo uuga aar goosatay waa ooridiisa Amina Weris oo la ogyay tay walaal keed Cali jirde ba soo marisay ayaa waxa ay tirsanaysaa waagii Silaanyo wasiirka siyaad Barre u
ahaa in uu cagta hoos teeda gelin jiray oo aanay juuq odhan kari jirin.
Waxa Silaanyo asxaab tiisa inta yari ka sii nooshay sheegeen in uu ku qalaf sanaa xaas kiisa oo aanay hadal ku soo celin kari jirin oo weliba dibin daabyo iyo darxumo u dheerayd. Dabeed iminka ayay iyana la haleeshay hogaanka markii odeyga xaal kiisu noqday mid aan sahlanayn dabeed na aar goosi dartiiayaanay dan ka gelin marka Dhuxul iyo Cukuse ay Silaanyo ciyaar siinayaan ee ay leeyiin kac oo hadana fadhiiso. Caqliga caafimaadka qabaa wuxuu ku siinayaa in aan xaas kaagu marnaba aanay raali ka noqon in lagu bahdalo oo bulshadu kugu sheekeysato hase yeeshee sababta Amina Weris ay uugu arxan darantay Silaanyo waa labadaa sababood ee midina tahay aar goosi midina tahay lacag xantoobso. Yaa Salaam waa aduun iska gebaabsi ah oo wixii aad arag taaba wixii kale ka daran yiin.